Torohevitra momba ny fahasalamana - Bezzia | Bezzia
Araka ny nomarihinay, ny fahasalamana dia sady tsy fisian'ny aretina no ahatongavana amin'ny toe-piainana ara-tsosialy, ara-tsaina ary ara-batana tsara indrindra. Izany no antony avy any Bezzia, te-hanome torohevitra ara-pahasalamana ianao hanatratrarana ireo tanjona ireo ary hiezaka ny hanisy marika ireo dingana hanoro anao ny lalana.
Ho fanampin'ny fampahalalana momba ny sakafo, ny voka-dratsy ateraky ny trangan-javatra sasany na ny fomba fampiharana ara-panatanjahantena araka ny tokony ho izy, dia hifantoka amin'ny fanomezana torolàlana anao koa izahay hanovana fihetsika sy hanaraka fahazarana mahasalama.
Ao amin'ity fizarana ity amin'ny torohevitra momba ny fahasalamana Manantena izahay fa hanome anao torolàlana hikarakarana ny tenanao ary hitazona ny tenanao ho salama tsara.
Ny moka amin'ny saokany? mba hahafahanao misoroka izany
ny Tony Torres hace Ora 4 .
Ny fisian'ny akne eo amin'ny saokany dia mety misy ifandraisany amin'ny antony samihafa. Anisan'izany ny fiovan'ny hormona izay mitranga amin'ny…
Ny tsy fahitan-tory sy ny voka-dratsin'ny fahasalamana
Ny tsy fahitan-tory no aretin'ny torimaso mahazatra indrindra, iray amin'ireo aretina lehibe amin'ny tontolo maoderina. Betsaka ireo…
Inona no atao hoe fandidiana refractive?
Nandritra ny taona vitsivitsy izao, ny olona manana olana amin'ny fahitana dia afaka nanao fandidiana refractive hanitsiana azy ireo sy hanafoanana…
Olana amin'ny akne? Sakafo tokony hialana
Raha manana olana amin'ny akne ianao dia tokony hialana amin'ny fihinanana sakafo sasany izay manimba ny hoditra amin'ireny tranga ireny….
Zava-pisotro vita an-trano mba hampihenana ny kolesterola
Raha voalaza fa manana kolesterola ambony ianao, dia tokony hanomboka hikarakara ny tenanao faran'izay haingana ianao. Satria manana cholesterol...
Ahoana ny fikarakarana ny tadim-peo
ny Tony Torres hace Herinandro 3 .
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny fikarakarana ny tadim-peo dia zavatra tsy misy, ary inoana fa tsy ilaina izany….
Mampidi-doza ve ny matory amin'ny volo mando?
Indraindray isika dia manao zavatra amin'ny fanaontsika andavanandro izay mety ho ratsy ary mampidi-doza ho an'ny fahasalamantsika, toy ny miala…
Spring asthenia, inona izany ary ny fomba hiadiana amin'izany
ny Tony Torres hace Herinandro 4 .
Ny fiovan'ny vanim-potoana dia matetika miaraka amin'ny fikorontanan'ny adaptatera, satria ny vatana dia tsy manana fitaovana betsaka…
Tetika 5 tsy mahazo lanja amin'ny fahavaratra
Efa miandry ny fahavaratra isika! Ireo andro be masoandro, andro lava eny amoron-dranomasina na dobo ary fialamboly...
Inona no atao hoe alopecia? Ny soritr'aretina sy ny fitsaboana
Olona maro no miahiahy momba ny fahaverezan'ny volo na ny alopecia, olana izay misy fiantraikany amin'ny lehilahy sy…
Inona no atao hoe aromatherapy? Tombontsoa ara-pahasalamana
Aromatherapy dia fitsaboana izay mampiasa ny iray amin'ireo saro-pady indrindra, fofona. Izy io dia momba ny…
Fampiasana dipoavatra tsara indrindra amin'ny fanafody
Mole, rahoviana no tokony ho taitra isika?
Fanafody nokleary, inona izany ary inona izany